I-Il Mandorlo House. Indlu yasefama yaseSpazzavento
Kuhlaziyo lwale ndlu sizamile ukugcina incasa yoyilo lwexesha, imigangatho kunye nesilingi iseyeyokuqala kunye neziko elikhulu, kanye indawo yokudibanisa ekulungiseleleni inyama kunye nesidlo sasemini esikhulu sendlu yasefama, namhlanje. ibuyise ubuhle okuninzi. yaye iqinisekisa iholide nge flavour lizwe. Indlu yeAlmond ifanelekile kwisibini okanye usapho olunokuthi luthembele kwigadi enkulu yabucala kunye nedama lokuqubha.
Indlu yaseMandorlo yalungiswa phakathi kokuphela kuka-2018 kunye nokuqala kuka-2019 ukwenza ukuhlala kwakho kube kuhle ngakumbi.
Zonke iinkcukacha ziyilelwe ukuba uhlale uziva usekhaya.
A indawo yokuhlala enkulu eziko eminyaka ubudala ukuba engama iinduli Umbrian kunye ebukekayo Citta della Pieve, ngoko iya wena ube lokulala enkulu (bed kabini kunye neebhedi ezimbini single), kunye kwisithuba ubumba ukutyibilika kunye lokuhlambela ehlaziyiweyo.
I-Spazzavento ikwindawo enenduli phambi kweMonte Cetona.
Oku kukuvumela ukuba ukonwabele umbono oqaqambileyo phakathi kweTuscany ne-Umbria.
Ubungakanani benkampani, ngaphezu kweehektare ezingama-25, emva koko kukuvumela ukuba uhambe ngokuntywiliselwa kwendalo, phakathi kwezidiliya, iindawo zomnquma, iziqhamo kunye nemithi.
Kuthi, iindwendwe ziziqwenga zentsapho.
Ukususela kumzuzu wokufika siyabamkela nge-aperitif eyamkelekileyo kunye newayini yethu kunye neoli yethu ye-organic kunye neemveliso zasekhaya kwi-breakfast basket kunye namaqebelengwane alungiselelwe sithi, ngokungathi sisidlo sakusasa sethu.
Kukho uthando kuzo zonke izenzo.
Sisoloko sifumaneka kubathengi bethu. Ngolwazi, inkxaso, iingcebiso kunye neengcebiso.
Kodwa sithanda, nangona kunjalo, ukubashiya izithuba kunye nokuzola kunye nokuzola kweholide.
Ukususela kumzuzu wokufika siyabamkela nge-aperitif eyamkelekileyo kunye newayini yethu kunye neoli yethu ye-organic kunye neemveliso z…